Umzi mveliso weChina - Abenzi beCango baseChina, abaXhasi
Izinto ezisisiseko sepeyinti yokubhaka umnyango yibhodi yoxinano. Umphezulu ufafazwa ngepeyinti engenisiwe (ezintathu ezantsi, amacala amathathu, kunye nokukhanya kabini) kangangezihlandlo ezisibhozo ukwenza inkqubo, oko kukuthi, emva kokupeyinta, iyatshiswa kwaye yomiswe kwigumbi lokomisa. Ibhodi yokubhaka yepeyinti ibonakaliswa ngombala oqaqambileyo, imodeli elula, ifuthe elibonakalayo lokubonwa, intle kakhulu kwaye inemfashini, ukusebenza ngokugqwesileyo okungangenwa manzi, ukubanakho kongcoliseko lokulwa nongcoliseko kunye nokucoca ngokulula. Ukungancedi kukuba inqanaba lobuchwephesha liphezulu kwaye inqanaba lokwala liphezulu, ke ixabiso lihlala liphezulu; xa siyisebenzisa, kufuneka siyikhathalele ngononophelo, nokoyika amaqhuma kunye nemikrwelo, yakube yonakele, kunzima ukuyilungisa kwaye uyibuyisele iyonke; kufanelekile ngakumbi kubaselula kunye nabathengi abaphezulu abaneemfuno eziphezulu kwinkangeleko kunye nomgangatho kwaye balandela ifashoni.